Mmetụta izizi na Amazon Fire HD 8 tablet | Gam akporosis
Amazon emeela ka emelite usoro mbadamba Ọkụ na nso nso a na HD 8 ọhụrụ, ngwaọrụ na - aghọ otu nke kasị mma maka ụlọ na ezinụlọ. Mbadamba zuru oke iji kesaa ya na ndị otu niile na-anọkarị oge n'ime ime ụlọ iji kpọọ ụdị ọdịnaya niile dị na ya.
O siri ike ịchọta ngwaahịa na ọnụahịa nke Fire HD 8, n'ihi nguzozi na akụrụngwa iji nwee ike inweta ya € 109,99 maka ụdị 16GB. Ngwaọrụ na-enye ezigbo mmetụta iji nweta 8-inch IPS LC ihuenyo, okwu stereo, MediaTek quad-core chip na 1 GB nke RAM. Otu nwere ike ikwu na o nwere obere RAM, mana o zuru ezu ịgagharị na mbadamba nkume nwere ihe ndị na-adọrọ mmasị.
1 Mbadamba ụrọ kacha mma maka ego
1.1 Nkọwa Amazon Fire HD 8
2 Mbadamba ụrọ na nhọrọ
Mbadamba ụrọ kacha mma maka ego
Ọ bụrụ na ị na-achọ mbadamba nkume ọhụrụ iji melite nke ị nwere maka ụlọ gị na nke ndị ezinụlọ na-ejikarị, atụmatụ Amazon dị ka nke zuru oke. E wezụga nke ahụ anyị na-ekwu maka ngwaọrụ nwere agbakọ ụlọ ahịa Amazon na ihe niile ọ gụnyere. Na United States, a na-ere ha dị ka donuts, n'ihi na ọ dịla mma ịzụta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile site na Amazon, yabụ enwere ọtụtụ ndị America na-azụta mbadamba Ọkụ maka mma nke ijikọ ụlọ ahịa n'ịntanetị.
Ọbụghị naanị nke a, mana ọ zuru oke maka ịkpọ ụdị ọdịnaya dị iche iche dị ka vidiyo, usoro, egwuregwu ma ọ bụ akwụkwọ. Ihe kachasị achọ ịmata bụ na, n’agbanyeghi na o nwere 1 GB nke RAM na a 4-isi Mediatek mgbawa, mbadamba nkume na-arụ ọrụ zuru oke. Ọbụna n'egwuregwu vidio dị ka Dan the Man, nke na-agbada n'oge ụfọdụ na ngwaọrụ ndị ọzọ, ahụmịhe egwuregwu zuru oke.
Amazon ejirila kụrụ aka nri dị na ngwaahịa ejiri ọnụahịa ya kwụọ ụgwọ ka ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọnwụnwa. Onye isi ahia ahụ nwere mmasị ịnye ụzọ nke onye ọrụ ahụ nwere ike ịzụta n'ime ụlọ ahịa gị, ihe ọzọ kpatara ọnụ ala dị ala maka mbadamba nkume nke nwere ike ịdị ọnụ karịa ma ọ bụrụ na anyị atụlee arụmọrụ ya.
Nkọwa Amazon Fire HD 8
8-anụ ọhịa HD (1280 x 800) ngosi mkpebi dị elu na 189ppi
1,3 GHz Quad-isi mgbawa
Nchekwa 1,5 GB Ram
16/32 GB nke nchekwa dị n'ime ya na nhọrọ iji gbasaa ya ruo 200 GB site na micro SD
Ndụ batrị 4,750 mAh ruo elekere 12 mgbe ejiri ya agwakọta
2 MP n'azụ igwefoto
Dolby Audio maka igwe okwu stereo
Ọkụ OS 5
Ibu nke gram 341
Amazon Underground maka free adịchaghị video egwuregwu
Mbadamba ụrọ na nhọrọ
Naanị nkwarụ nke Fire HD 8 mbadamba nwere bụ mkpebi nke ihuenyo ya, ebe ọ bụrụ na ọ bụ Full HD ọ ga-abụ ngwaọrụ zuru oke. Mana ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị maka nke a ime, ebe ọ bụ na € 109,99 enweghị ike ịrịọ maka ndị ọzọ. O nwekwara a magburu onwe ya ụda ya na igwe okwu okwu stereo di na ala mbadamba nkume, ya mere inwe ihe ojo di nma ma obu igwu vidio bu ihe omuma.
Ọ bụrụ na anyị tinye na nke a ị nwere ike iwunye Play StoreSite n'iji ntakịrị n'aka anyị site na ibudata APKs na ndị ọzọ, ịnwere ike ịnwe ngwa niile nke ụlọ ahịa Amazon maka ngwa na egwuregwu vidio enweghị, akụkụ nkwarụ ọzọ a N'ezie, ọ bụrụ na ị na-achọ ụgwọ ngwa na egwuregwu, Underground bụ ụzọ kachasị mma iji nweta ya.
Cheta na i nwere 16GB mbipute maka € 109,99 na 32GB maka € 129,99. Ọ bụrụ na ị na-achọ mbadamba iji nye ezinụlọ a ekeresimesi a na ọnụ ala, enweghị ụzọ ka mma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nyocha » Ihe ngosi mbu na Amazon Fire HD 8
Acer weputara 15 "Chromebook maka nani $ 199